निषेधाज्ञाले क कस्को पेटमा लात ? - Sidha News
निषेधाज्ञाले क कस्को पेटमा लात ?
काठमाडौं। कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको एक महिना पुग्न लागेको छ । १६ वैशाखबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा जेठभर पनि लम्बने निश्चित भएको छ । आजबाट अर्को एक साताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा झन् कडा पारिएको छ । उपत्यकामा किराना पसल समेत एक हप्ता बन्द गर्न भनिएको छ । आवतजावत अत्यावश्यक बाहेकको अवस्थामा रोक लगाइएको छ । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि पाँच लाखसम्मको जरिवाना तोकिएको छ ।
यो हदसम्म निषेधाज्ञा कडा पारिँदा देशको कुन कुन क्षेत्र प्रभावित भए र कतिले रोजगारी गुमाए भन्नेबारे सरकारले वास्ता गरेको छैन । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा शिक्षा, यातायात, पर्यटन, मनोरञ्जन, निर्माण सामाग्रीलगायतका क्षेत्रमा रोजगारी पाएकाहरु सबैभन्दा प्रभावित छन् ।
सयौं निजी विद्यालय सदाका लागि बन्द हुने अवस्थामा छन् । यसै शैक्षिक सत्रबाट काठमाडौंका नाम चलेका विद्यालयहरु बन्द हुने बुझिएको छ । त्यहाँ काम गर्ने हजारौं शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाउने भएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौंले गत वर्ष नै रोजगारी गुमाइसकेका छन् । यो वर्षको निषेधाज्ञापछि थप श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । सिनेमा हललगायत मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु गत वर्ष देखि नै बेरोजगार बसेका छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले केही महिनायता काम पाउन थालेकोमा फेरि रोकिएपछि प्रभावित भएका छन् । कृषिमा लगानी गर्नेहरुले पनि ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको छ । उत्पादनहरु बिक्न छाडेका छन् । कृषकको खेतबारीमा कौडीको मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्नेहरुले बजारमा भने चर्को मूल्य लिइरहेका छन् ।
सडक पेटीमा सामान विक्री गरेर जिविकोपार्जन गर्नेहरु पनि प्रभावित भएका छन् । यातायात क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित भएको छ । सवारी साधनहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेर तानिएका छन् ।
चालक र सवारीमा काम गर्ने मजदूरहरु बेरोजगार भएका छन् । यातायात क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु डुबेका छन् । हवाई क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि रोजगारी गुमाएका छन् । यसरी आँकलन गर्दा देशमा लाखौंले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । लाखौंले रोजगारी गुमाउँदा उत्पन्न हुने परिणाम भयावह हुनसक्छ ।